နိုင် ငံလုံးဆိုင် ရာ ကျောင်းသာထု အ ရေးပေါ်အစည်းအ ဝေး
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/27/20140အကြံပြုခြင်း
ဘယ်သူကမှ ပျက်အောင် မပြင်ပါဘူးတဲ့ ဦးလှဆွေကတောင် ပြောနေပြီ
Credit>> Ei Ei Chaw (အင်တာဗျူးလုပ်ထားပေးခြင်းဖြစ်တယ်)
ကျမသားလေးရဲ့ အကျင့်စရိုက်ကို ကျမအသိဆုံးပါ၊ မိဘကိုလည်း ဘယ်သောအခါကမှ မလိမ်တတ်ဘူး။ သူများကိုလည်း မလိမ်တတ်ဘူး၊ သူရှိတိုင်းပဲ ပြောတတ်တယ်၊ နေတတ်တယ်။ သူတို့တွေရဲ့စိတ်က ကလေးလိုမျိုးပဲ၊ မရိုင်းစိုင်းဘူး၊ ရိုးသားကြတယ်။ အခုချိန်အထိ သားလေးက ဒီအတိုင်းပါပဲဆိုတာ ကျမယုံကြည်တယ်။ လို့ မိခင် ၂ ယောက်လုံးက အားရပါးရဖြေကြပါတယ်။ ကျမမှာလည်း မြန်မာဘာသာကနေ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ရတာတဲ့ကြားက ရခိုင်းစကားကိုလည်း ဘာသာပြန်တဆင့်နဲ့ နားလည်အောင်ကြိုးစားရသေးတယ်။
ကျမနဲ့ မိခင် ၂ ယောက်ဆက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာ `အန်တီမှာ သား ၂ ပဲရှိပါတယ်၊ ၀င်းဇော်ထွန်းက အငယ်ပေါ့၊ အန်တီတို့ ဆင်းရဲပါတယ်၊ အန်တီက ရွာမှာ မုန့်ဟင်းခါးရောင်းတယ်။ သားက ၉ တန်းကျောင်းသားဆို တော့ သူများလိုမျိုးမသုံးနိုင်ဘူး၊ အဲဒါနဲ့ အမေ့ကိုသနားတယ်ဆိုပြီး အလုပ်လုပ်ဖို့ ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာတာ ၆ လပဲရှိသေးတယ် သမီရေ။ သားက ကလေးလိုပဲ ...... အိမ်မှာနေတုန်းကဆိုရင် သူ့ကိုအမြဲတမ်းထမင်းခွံ့ကျွေးရတာ၊ သူကအငယ်ဆုံးဆိုတော့ နွဲ့ဆိုးဆိုးတာပေါ့နော။ သူ့ကိုလည်း အန်တီအရမ်းချစ်တာ အခြားအမေတွေထက်ပိုမယ်လို့ အန်တီထင်တယ် ... သမီးရဲ့။ သူ့ကို တခါမှလည်း မရိုက်ဖူးဘူး၊ ရိုက်ဖို့လည်းမလိုအောင် သူကလိမ္မာတာကိုး။ သားသတင်းကြားရတကည်းက အန်တီလေ တက်တာရော့၊ မေ့လဲတာရော၊ ပြီးတော့လေ အန်တီ့သားလေးအတွက်ယူကျုံးမရဖြစ်ပြီး အိမ်ပေါ်ကခုန်ချတာ။ အန်တီသေလိုက်ချင်တာလေ။ ဒါနဲ့ မစားနိုင်မသောက်နိုင်နဲ့ အန်တီအတော်လေး ပိန်းသွားတာ။ အန်တီကလေ ကိုယ့်သားတယောက်တည်းကို စိတ်ပူတာမဟုတ်ဘူးနော်၊ တဖက်ကအသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ ကလေးတွေရဲ့မိဘတွေ ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်၊ သူတို့ဆိုရင် အန်တီတို့ထက်ဆပေါင်းများစွာခံစားရမှာနော်၊ အန်တီတို့မှာက သားတွေအဖမ်းခံရတာပဲရှိတယ်။ သူတို့မှာက သားရော သမီးရောအဓမ္မပြုခံရတယ်၊ အသတ်လည်းခံရတယ်ဆိုတော့ ပိုပြီးသောကရောက်မှာလေ။ အန်တီက နဂိုကလည်း ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး။ အဲဒါ သားကြီးရဲ့မိန်းမ .... ချွေးမက အမေရေ အမေသေလို့မဖြစ်ဘူး၊ အမေသေရင် မောင်လေးကို အမေဘယ်လိုကူညီနိုင်မလဲ၊ မောင်လေးကို အမေက ဒီတိုင်းပဲ ပစ်ထားတော့မှာလား။ အမေသေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ၊ အမေကျန်းမားအောင် နေရမယ်၊ မောင်လေးကိုကူညီ နိုင်အောင် အမေအသက်ရှင်နေဖို့လိုတယ် .... လို့ချွေးမက သတိပေးလို့ အန်တီလည်း အားတင်းထားပြီး ငါ့သားကိုငါကယ်မယ်ဆိုပြီး ချက်ချင်း ထိုင်းကိုလာဖို့ ဆုံးဖြတ်တာ။ အမှန်တကယ်ကို ရတဲ့နည်းနဲ့ ရှိတာတွေအကုန်ထုခွဲရောင်းချပြီးလာမှာ သမီးရဲ့။ ဒါပေမယ့် အန်တီတို့လူမျိုးတွေက ၀ိုင်းကူညီကြတာ ဆိုတော့ အန်တီတို့လည်း ဒီဘက်ကိုအမြန်လာနိုင်တာပေါ့။ အန်တီတို့ကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့သူတွေကို အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ကွယ်´။
MissMyanmar မေဘရဏီသော် ကို လည်း အားပေး ကြ ၇ အောင်
ရှမ်းတိုင်း၇င်းသားတွေ ၇ဲ့အ ကနဲ့ကမ္ဘာ ကို ပြသမဲ့MissMyanmar မေဘရဏီသော် ကို လည်း အားပေး ကြ ၇ အောင် ..
မှာ တနေ့ တကြိမ် vote ပေး နိုင် ပါ ပြီ
Last hour of Hannah Witheridge and David Mille
ပုံတွေကို သေချာ လေ့လာရင်
ဒေးဗစ် တို့ သောက်တဲ့ ဘီယာ အရောင်ကြညိ့ပါ ။
ဟန်နာ သောက်တဲ့ ခွက်က ဘီယာမဟုတ်ဖူး ။
ဖျော်ရည် တမျိုးမျိုးဖြစ်လို့စုတ်ပိုက် ထဲ့ထားပါတယ် ။
(ဥရောပ တိုက်သားတွေ ဝိုင် နဲ့ဘီယာ ပိုက်မစုတ်တတ်ကြဖူး)
ဟန်နာ က ဆိုင်ထဲက ပြသနာဖြစ်ပြီး ထွက်လာတယ် ဆိုပါတယ် ။
ဘာပြသနာ လဲ ။
ဆိုင်အဝမှာ ဒေါသ ထွက်နေတာကို တားနေပါသေးတယ် ။
နောက်တော့ ရှေ့ က သုတ်သုတ် နဲ့ထွက်သွားပါတယ် ။
မူးလဲ မလို ဖြစ်သွား လို့တွန်ဘရိုက်က လိုက်ဆွဲရပါတယ် ။
ဟန်နာ ကို Ac Bar ထဲက ခပ်လိုက်တဲ့
ဘာဆေး မိလာတာလဲ ။
ဒေါသ ထွက်မယ် ။
နောက်ဆုံး သတိလစ်သွားမယ် ။
မုဒိန်း ကျင့်ခံရတယ် ။
ခေါင်းကို ထုတယ် ။
ပေါက်ပြားနဲ့ထုတယ် ။
ကျောက်တုံး နဲ့ထုတယ် ပြောကြတယ် ။
အရိုးစ တွေ ဘယ်လို ထွက်လာတာလဲ ။
သေသွားတာတောင် သိလိုက်ရဲ့ လား ။
ဟန်နာက သူတည်းတဲ့ အိပ်ခန်းကို
အဖေါ်တွေက လိုက်ပို့ ပြီး ပြန်မယ် ။
နောက်က လိုက်မယ် ။
မူးမူး နဲ့မုဒိန်းကျင့်နေတာ
ဟန်နာ့ အခန်းထဲက အသံကြားလို့ 
ဒေးဗစ်က စိတ်ပူပြီး သွားကြည့်တာ
မာဖီးယားအုပ် နဲ့ တိုးပြီး
ဝိုင်းချုပ်ကြပြီး ထိုးကြတော့ သတိလစ်မယ် ။
ဆေးက ဘာဆေး အမျိုးအစားလဲ ။
အိုးရှင်းဗျူးအခန်း ဖွဲ့ စည်းပုံ ဘယ်လိုလဲ ။
ဟန်နာ ပေါ်က မျက်နှာ သုတ်ပုဝါက
တည်းခိုခန်းက လား ။ သူကိုယ်ပိုင်လား
ရှောင် က ဘယ်က ပါလာတာလဲ ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/26/20140အကြံပြုခြင်း
ကိုပါကြီးဇနီးဖြစ်သူ မသန္တာအား မေးမြန်ချက်
သေဆုံးသွားသော ကိုပါကြီးအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ
Photo; Kumudra/ Aung Gyi Dvb
Thai-Burmese translator known as ( Ko Ye ) hiring by thai
police threatened two young burmese boys.
He show us translator ID card issue by
Myanmar embassy as he said.
He slaped and kicked to our faces then he said that
'' Do you know how to kill the people in Thailand?''
" I will take out your teeth"
"Either I will cut your body in pieces and cover
with concrete and throw in the water or I will
put tires on your body and fire on."
"If you are not guilty yourself I will cut your fingers."
'"I will help you to get4yrs. sentence only
If you say that we did kill English couple."
We don't want to die behind bar so we lied to police
and we will tell the truth at court.
( Ko Ye isaBengali and two boys are Rakhine .)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/25/20140အကြံပြုခြင်း
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အသင်းအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
ဦးကျော်သောင်းက “ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်နာရီလောက် တွေ့ခွင့်ရတယ်။
ကလေးတွေက ကျွန်တော်တို့ လုံးဝမလုပ်ရပါဘူးလို့ ပြောတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အရင်တစ်ခါတွေ့တုန်းက ဘာလို့ဝန်ခံတဲ့
သဘောမျိုး ပြောရတာလဲလို့ ပြန်မေးတော့ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို
ကိုရဲဆိုတဲ့ ဘာသာပြန်ပွဲစားက မင်းတို့ဘာထင်လဲ။ အူတွေကို
အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ ပင်လယ်ထဲ မျှောပစ်လိုက်မယ်။
ဒါမှမဟုတ် ကားတာယာကွင်း စွပ်ပြီးတော့ မီးရှို့ပစ်မယ်
လို့ပြောလို့ ကြောက်ရွံ့ပြီး သူတို့အနေနဲ့ သေရင်လည်း
သေပါလေ့စေတော့ဆိုပြီး ဝန်ခံခဲ့ရတယ်လို့ ပြောတယ်”
ဟုThe Daily Elevenသတင်းစာသို့ ပြောကြားသည်။
နောက်တရက်လဲအဲ့ဒီမှာဘဲထားပြီး ခြိမ်းခြောက်တယ် မင်းတို့ဟာတရားဝင်
တာဝန်ရှိရဲအရာရှိနှင့် မြန်မာစကားပြန် မှ
ပါးကို (၇-၈) ချက်ခန့် ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရကြောင်း၊
မြန်မာစကားပြန်ဆိုသူမှာမြန်မာသံရုံးမှ ထုတ်ပေးထားသည့် ဆိုသည့်
ကဒ်ပြား ကို ပြသခဲ့ပါသည်။
ဂုံနီအိတ်ထဲထဲ့ကာ၊ မြစ်ထဲ မျောပစ်မည်၊
မီးရှို့သတ်ဖြတ်ပစ်မည်ဟု၊ ချိမ်းခြောက်ခဲ့ ပါသည်၊
ထို့အပြင်၊ ချော့မော့ ပြီးလဲ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်မိမိတို့အနေဖြင့်သတ်သည်ဟုဝင်ခံပါက၊
ထောင် ( ၄-၅ နှစ်) သာကျခံရနိုင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်၊
ချော့မော့ဖျားယောင်း မှု့များကြောင့်လိမ်လည် ထွက်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျနော်အဖမ်းခံရစဉ် အောင်သပြေစစ်ကြောရေးစခန်းမှာ ထောက်လှမ်းရေးတွေ
က သူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့မမှန်မကန် ကိစ္စတွေကို ဝန်ခံဘို့ရက်ရက်စက်စက် မညှာ
မတာညှင်းပန်းနှိပ်စက်ကြပါတယ်။ မကျူးလွန်မှန်းသိရက်နဲ့ အတင်းအကျပ်
ဝန်ခံခိုင်းပါတယ် ကျနော်ကလည်းအမှန်အတိုင်း ဒီကိစ္စကို မကျူးလွန်ပါဘဲနဲ့
သေရင်သေပလေ့စေဆိုပြီး ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့ နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းမှုကို
သူတို့ကလည်းနည်းမျိုးစုံသုံးပြီးနှိပ်စက်ပါတယ် ။ထောက်လှမ်းရေးတချို့က ကျနော့
ကို ထွက်ပြေးဘို့ပြောပါတယ် ကျနော်သာထွက်ပြေးခဲ့ရင် ကျနော့ကိုပြေးလို့ဆိုပြီး
ပစ်သတ်လိုက်မယ် ပြီးရင် ဗုံးခွဲမှုဟာ ကျနော်ခွဲပါတယ်ဆိုပြီး န ဝ တ စစ်အစိုးရက
သတင်းထုတ်မယ်ပေါ့ ဒါတွေဟာ ကလေးကစားကွက်တွေဆိုတာသိလို့ သူတို့
ကျနော့ကိုတော့ တိုးမြင့်ပြီးနှိပ်စက်ပါတော့တယ် ဝန်မခံမချင်း အတင်းရိုက်နှက်ပါ
တော့တယ် အဆိုးဆုံးကတော့ ကျနော့ခေါင်းက်ို အဆက်မပြတ်ရိုက်တာပါဘဲ။
ကျနော်ကတော်ရုံနဲ့မသေတော့ ဦးနှောက်ပျက်သွားအောင် လုပ်တာဘဲဖြစ်ပါ
တယ် ။ ဒါကိုသိလာတော့ နောက်ဆုံးမှာ အမှုတွဲတွေက မခံနိုင်တော့ဘဲ မလုပ်ဘဲ
နဲ့ လုပ်တယ်ဆိုပြီး ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ တစ်ယောက်ထဲကျန်တဲ့ ကျနော့ကိုပိုပြီး ဖိပါတော့တယ် နောက်ဆုံး
မှာတော့ အကြံရတာနဲ့ လုပ်ပါတယ်ပြောပြီး မဟုတ်တရုတ် လုပ်ဇာတ်ကြီကို
အဓိပ္ပါယ်မဲ့စွာပြောလိုက်ပါတော့တယ် ။ ကျနော်သာသေသွားခဲ့ရင် ဦးနှောက်ပျက်
သွားခဲ့ရင် အခုလိုပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး ထောင်ထဲမှာ ၂၃ နှစ်တော့ စစ်အစိုးရ
လက်ထက်မှာနေလိုက်ရပါတယ်။ ခုကျနော် အဲဒီအကြောင်းတွေကို ရေးသား
ဖော်ထုတ်လို့ရနေပါပြီ ။ နောင်များမှ ဆက်ရေးပါအုံးမယ် ။
( ကိုပါကြီးကို အလေးပြုပါတယ် )
သန့်ဇော် (သန်လျင် )
ကော့မှူးမြို့နယ် တွင်ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လျူဒါန်းသောTraining Academy ကျောင်းဖွင့်ပွဲ
ဒ်ါခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လျူဒါန်းသော (HCTA ) Hospitallity And Catering Training Academy ကျောင်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ
အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခွဲက ရန်ကုန်တိုင်း ကော့မှူးမြို့နယ် တွင်ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ လျူဒါန်းသော (HCTA ) Hospitallity And Catering Training Academy ကျောင်းဖွင့်ပွဲကို
ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၊ Dusit Thaani International Group မှ CEO Mr. Chanin Donavanik ( HCTA နာယက) ၊ HCTA Programme Director ဦးဇွဲနန္ဒ၊ ဧည့်သည်တော်များ အလျူ
ရှင်များ သင်တန်းသားများနှင့် အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ အခမ်းနားတွင် ခေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့ဝင် ဦးထင်ကျော်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်
ဆန်းစုကြည်မှ သင်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်ရခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုနောက် HCTA နာယက မှ အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ ဦးစွဲနန္ဒမှ HCTA ကျောင်းအကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲပြီး အခမ်း
အနားကိုရပ်နားခဲ့ပြီး အဖွဲ့ချုပ်နာယက ဦးတင်ဦး၊ ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့မှ HCTA ကျောင်းဖွင့်ပွဲကို ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး နောက် သင်တန်းသားများ သင်ယူနေမှုများကို ကြည်ရှုခဲ့ကြသည်။
လိပ်ကျွန်းပေါ် က လူသတ်ပြီး ထားခဲ့တဲ့ နေရာ
အသတ်ခံရသူတွေ တည်းခို ခဲ့တဲ့ တည်းခိုခန်းကို
စကော့ယာဒ် မှ စုံထောက်များ စစ်ဆေး
့ ( ၂၄၊၁၀၊၂၀၁၄) ရက်နေ့ မနက် (၁၁) နာရီ လောက်မှာ
ကော့စမွေထောင်ထဲမှာ နိုင်ငံခြားသား(၂) ယောက်ကို
သတ်မှု့နဲ့ အစွပ်စွဲခံထားရတဲ့ မြန်မာလူငယ်လေးနှစ်ယောက်ကို မိဘများနှင့်အတူတွ့ဆုံဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ၊လူသတ်မှု့ နဲ့ ဘယ်လိုမှမပတ်သက်ကြောင်း၊
နှိပ်စက်ညှင်းပန်း၊ ခြိမ်းချောက် ပြောဆိုခဲ့လို့
မသတ်ဘဲနဲ့ သတ်ပါတယ်လို့ ဝင်ခံခဲ့ တာလို့ ပြောပြပါတယ်။
သူတို့ ရဲ့ပြောပြချက်တွေ ကို ကျနော်တုိ့နဲ့အတူပါသွားတဲ့
( မိမိအားဖမ်းဆီးစဉ်၊ ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရကြောင်း၊
ထို့အပြင်၊ ချော့မော့ ပြီးလဲ မေးမြန်းခဲ့ပါသည်၊ မိမိတို့အနေဖြင့်သတ်သည်ဟုဝင်ခံပါက၊
ထို့အပြင်မိမိတို့ အနေဖြင့် သံရုံးမှဆိုပြီးရောက်လာသည့်
(ဝင်းဇော်ထွန်း ( ခ) ဝေဖြိုး)
- ဘီယာသွားဝယ်တဲ့ CCTV ကပုံတွေကိုပြ ပြီး
နောက်တရက်လဲအဲ့ဒီမှာဘဲထားပြီး ခြိမ်းခြောက်တယ် မင်းတို့ဟာတရားဝင်လာနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော့်ကိုလာဖမ်းတော့ ၃၀ ရက်နေ့ပါ
ထိုင်းဘတ်ငွေ( ၁၀ )သန်း
ထိုင်းသူဌေး လေးဦးမှထောက်ပံမည် ။
ထိုင်းနိုင်ငံရှေ့နေ များကောင်စီက မြန်မာ
လုပ်သား နှစ်ဦး၏ အမှုကို ၎င်းတို့အဖွဲ့မှ
စစ်ဆေးမှုအထူးကျွမ်းကျင် ၁၂ ဦး ဖြင့်စုံစမ်းဖော်
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး နှင့်
အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံရှေ့နေများကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်
အဖွဲ့ဝင်များသည် မြန် မာလုပ်သားနှစ်ဦး၏ အမှုကို
စစ်ဆေးရန်အတွက် လူဦးရေ ၁၇ ဦး ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး
ကောင်စီ၏ စရိတ်ဖြင့် စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးသွားမည်ဟု
မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးဝင်းမောင်ထံ လာရောက်ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
‘‘အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ ကတည်းက အမှုကို မသင်္ကာဖြစ်ခဲ့တာပါ။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ကူညီပေးရမယ်ဆိုတာ စဉ်းစားနေတာပါ။
သံအမတ် ကြီးက ကူညီခွင့်ပေးလို့လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော် တို့အဖွဲ့က ဒီအမှုကို စစ်ဆေးဖို့ လူဦးရေ ၁၇ ဦးနဲ့
အဲဒီထဲကမှ ဒီအမှုကို စစ် ဆေးဖို့အတွက်
ကျွမ်းကျင်တဲ့ရှေ့ နေ ၁၂ ဦးနဲ့ စစ်ဆေးသွားမှာပါ။
ကုန်ကျစရိတ်တွေလည်း ပေးစရာ မလိုပါဘူး’’ဟု
ထိုင်းနိုင်ငံရှေ့နေ များကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌက
သံအမတ် ကြီး ဦးဝင်းမောင်အား ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ရှေ့နေများ ကောင်စီသည်
အောက်တိုဘာ ၂၁ရက်က ဖမ်းဆီးခံမြန်မာလုပ်သား နှစ်ဦးနှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး မြန်မာလုပ်သား နှစ်ဦးအား
စစ် ဆေးမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း
အဆိုပါကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ က ပြောသည်။
‘‘ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်း က အစိုးရနဲ့လည်း
အမှီအခိုကင်း သလို ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့
လည်း အမှီအခို ကင်းပါတယ်’’ဟု
ထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ နေများကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌက
ဖမ်းဆီးခံ မြန်မာလုပ်သား နှစ်ဦးအား အာမခံရရှိရန်
အာမခံရရှိရန် တစ်ဦးလျှင် ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁၀ သန်းနှင့်
က အာမခံပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာသံရုံး အထူးအဖွဲ့မှ
မိဘများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး
ကူညီ မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည် ဟု ကတိပေးသွားခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးခံ မြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦး၏ မိဘ များ ထိုင်းနိုင်ငံလေဆိပ်သို့ ရောက်ရှိလာချိန်တွင်
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေ စိုက် မီဒီယာများနှင့် ပြည်ပမီဒီယာ များမှ
သတင်းထောက်၁၀၀ ၀န်း ကျင်လာရောက် သတင်းယူခဲ့ကြ သည်။
အဆိုပါ သတင်းထောက် များသည် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးရှေ့ သတင်းယူရန် စောင့်ဆိုင်း
ကိုပါကြီး၏ ဇနီးဖြစ်သူထံ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှ ပထမဆုံးအကြိမ် ဆက်သွယ်လာဟုဆို ။
ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ)ကိုပါကြီး သေဆုံးမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူ
မသန္တာထံ အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှဟုဆိုကာ အမျိုးသားတစ်ဦးက
ယနေ့ညနေ ၃း၎ဝ အချိန်ခန့်က ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်လာကြောင်း မသန္တာ၏
“ကျိုက်မရောရဲစခန်းမှာ လူပျောက်တိုင်ထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေး
ချင်လို့လာတွေ့နိုင်မလားမေးတယ်၊ ရှင်တို့က လာတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလား၊
ကျွန်မကအသုဘရှင်လေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမဟုတ်ဘူးလားလို့ ပြန်ပြောလိုက်
တယ်၊အဲတာနဲ့ တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့၊ ထပ်ပြီးဆက်သွယ်လိုက်ပါ့မယ်ဆိုပြီး
ဖုန်းချသွားတယ်”ဟု မသန္တာက ပြောသည်။
“ရဲစခန်းမှာ လူပျောက်တိုင်ထားတဲ့ကိစ္စကို တကယ်က ရဲစခန်းကပဲ ဆက်သွယ်
ရမှာပေါ့၊ စစ်ဘက်က ဆက်သွယ်တယ်ဆိုတော့ ထူးခြားနေတယ်၊ နာမည်နဲ့
ရာထူးမေးတော့လည်း မဖြေသွားဘူး”ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
အဆိုပါ ခေါ်ဆိုသည့် ဖုန်းနံပါတ်သို့ မြန်မာ့ခေတ်မှ အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်ခဲ့
မသန္တာအနေဖြင့် တစ်လခန့်ပျောက်ဆုံးနေသည့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကိုပါကြီးနှင့်
ပတ်သက်၍ အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်နေ့က မွန်ပြည်နယ်ကျိုက်မရောမြို့ရှိ
ခမရ(၂ဝ၈)နှင့် အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်သို့ သွားရောက်စုံစမ်းခဲ့ဖူးပြီး
ထို့နောက် ၂၁ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကိုပါကြီးကိစ္စကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ၂၄ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိသည့် The Voice Daily
သတင်းစာတွင် “တစ်လကြာအဖမ်းခံထားရသည့် ကိုပါကြီးကို အသေဖမ်းမိ
ကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်ဟု မသန္တာက ဆိုသည်။
များဖြင့်တိုင်ပင်နေပြီး နိုင်ငံရေးအလွှာအသီးသီး ပါဝင်သည့်ကော်မရှင်တစ်ရပ်
“လောလောဆယ်တော့ အလောင်းပြန်ရဖို့ကိုပဲ အရင်လုပ်မယ်၊ ဒီညတွင်းချင်း
ကျိုက်မရောကို လိုက်သွားမယ်”ဟု မသန္တာက ပြောသည်။
သတင်းဓါတ်ပုံ- The Myanma Age.
ထိုနောက် စစ်ဆေးသူ ဗိုလ်ကြီး (စန်းမင်းအောင်) အရာခံဗိုလ် လှဝင်းဦး တို့မှ တပ်ကြပ်ကြီး(၁) ဦး( အမည်မသိ) နှုင့် ၇ဲဘော် သောင်ဌေးလှိုင် တို့အား သံကြိုးခတ်ထားသော တိုင်မှ သံကြိုးဖြုတ်ခိုင်းပြီး ကြည့်ခိုင်းရာ ကိုပါကြီး၏ နောက်ဘက် ကျောရိုး တခုလုံးနီးပါးမှာ နောက်ဘက်မှ သေနတ်ဒင်ဖြင့် အားကုန် ဆောက်နှက် ရိုက်ထားမှုကြောင့် ကြေမွလုနီးပါးဖြစ်ပြီး ကိုပါကြီး အသက်၇ှူနေမှုမှာလဲ အသက်ပြင်းကြီးများ ဖြစ်သည့်အပြင် မူမှန် မဟုတ်တော့ကြောင်း ၇ိပ်စားမိကြပြီး ဗိုလ်ကြီး မင်းစန်းအောင်မှ ၄င်းတို့ ချောဆွဲလာသော အ၀ါရောင် နစ်ဆန်းထရပ်ကားပေါ်သို့ ရဲဘော်များနှင့် ည ၉နာ၇ီတွင် ဆွဲယူ ထိုးတင်ခဲ့သည်။
ကိုပါကြီးအား မီးရှို့ပြီးနောက်တွင် ကြွင်းကျန်သော အရိုးနှင့် ဦးခေါင်ခွံတို့အား ထပ်မံ မြေမြုပ်ရန် တပ်ရင်းမှူးမှ ညွန်ကြားသဖြင့် အဆိုပါ မီးရှို့သောနေရာနှင့် မလှမ်းမကမ်း ပေ၂၀၀ လောက်မျှ၇ှိသော သစ်ပင်အို အမြစ်ကြားများအတွင်းသို့ ပစ်ထည့်၍ နီးစပ်ရာမှု အမှိုက်နှင့် မြေဆွေများ ပက်ဖုံးကာ အဆုံးသတ်ခဲ့ကြောင်းပါ……….
Saw Eh Knyaw ....ဒီpost ရေးတဲ့လူကိုမသိဘူး ဒါပေမဲ့သူရေးတာနဲ့ကျွန်တော်သိခဲ့တာတွေက ၈၅% မှန်ကန်ပါတယ် လွှဲသွားတာက လက်ပစ်ဗုံးပါးထဲငုံထားခိုင်းတာနဲနဲလွှဲပါတယ်။
DKBA မှဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိအောင်နိုင်ဟု တပ်မတော်မှထုတ်ပြန်ချက်အပေါ်
ဒီမိုကရေစီကရင်အကျိုးပြုတပ်မတော်ရဲ့ မြဝတီဆက်ဆံရေးရုံး အရာရှိ ဗိုလ်ကြီး စိုးမြင့်
ကတော့ သူတို့ဆီမှာ ပြန်ကြားရေးဌာန မရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ ကိုပါကြီးဟာ သူတို့
တပ်ဖွဲ့ဝင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ငြင်းဆိုပါတယ်။
" ကျနော်တို့ဆီမှာ ပြန်ကြားရေးဌာနဆိုတာ မဖွဲ့စည်းရသေးဘူး။ ကိုပါကြီးဆိုတဲ့
နံမည်၊ ကိုအောင်နိုင်ဆိုတဲ့နံမည်က ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း မရှိဘူး။ အရာရှိရဲ့
စာရင်း ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ဆီမှာ သတင်းလာယူတယ်။
မှတ်တမ်းလာယူတယ်။ သတင်းသမား၊ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ပေါ့။
သတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်ကိုပဲ ယူဆောင်ခြင်း ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုပါကြီးကို စစ်သားလုပ်ဖို့အတွက် ဒီနေ့အထိ တခါမှ
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကပဲ ဇနီးဖြစ်သူက ကိုပါကြီး ပျောက်ဆုံးနေမူ စစ်တပ်က ဖမ်းဆီး
ထားမှုတွေ အတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ ဆောင်ရွက်ဖို့ ရန်ကုန်မြို့မှာ သတင်းစာ
ရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့တာပါ။ အောက်တိုဘာလ ၁၉ရက်နဲ့ ၂၀ရက်နေ့တွေမှာ မွန်ပြည်နယ်
အခြေစိုက် ခလရ ၂၀၈ ကို သွားရောက် စုံစမ်းခဲ့တဲ့အခါ ဖမ်းဆီးတာကို အတည်ပြု
ပေမဲ့ မိသားစုနဲ့ တွေခွင့်မပေးဘူးလို့ ဇနီးဖြစ်သူက ဆိုပါတယ် ။
"အရင်တုန်းကတော့ ကျမက မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုနဲ့ ကျမ တရားစွဲတယ်။
အခုကတော့ ကျမ လူသတ်မှုနဲ့ပါ တရားစွဲမယ်။ ကျမကတော့ အလောင်းပြန်တောင်း
မယ်။ ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဘာလဲ ကျမ စစ်ချင်တယ်။ တကယ်လို့
သူတို့က မရှိဘူး မီးသဂြိုလ်လိုက်ပြီ ဆိုရင်လည်း ကျမကို လိမ်ရင်လည်း ရတယ်။
ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက်မရှိလည်း ဖမ်းသွားတယ်။ သူတို့လက်ထဲမှာ သေတယ်ဆိုလည်း
ဒါက ကျမ အစကတည်းက ပြောပြီးသားပဲ။ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲ ရရ၊ ရှင်လျက်ရရ၊ အ
သက်ရှင်လျက် ကျိုးကန်းနေလည်း ကျမ စွဲဦးမှာပဲ တရားက။ အခုသေတယ်ဆိုတော့
တပ်မတော်က စာနယ်ဇင်းကောင်စီကိုပေးပို့ထားတဲ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့
ကိုအောင်ကျော်နိုင်(ခ)ကိုပါကြီးရဲ့ အလောင်းကို မွန်ပြည်နယ်ရွေဝါချောင် နဲ့ ကီလိ
မီတာ ၈၀၀လောက် အကွာမှာမြေမြုပ် သဂြိုလ်ပြိးစီးခဲ့ကြောင်း ကို ရေးသားထားပြီး
ထိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အနေနဲ့ ဇနီးဖြစ်သူကို အသိပေးပြောကြား သွားမှာဖြစ်ကြောင်း နဲ့
လိုအပ်တဲ့ ကူညီထောက်ပံ့မူတွေပေး သွား မှာဖြစ်ကြောင်းတွေ ကိုရေးသားထား
ကိုအောင်ကျော်နိုင် (ခ) ကိုပါကြိးဟာ ၁၉၈၈ခုနှစ်က အမျိုသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က
ဖွဲစည်းခဲ့တဲ့ လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေထဲက တဦးဖြစ်ပြီး သုံးရောင်ခြယ်အဖွဲ့မှာ
လည်း ပါဝင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ဇနီးဖြစ်သူ ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ထိုင်းမြန်မာ
နယ်စပ်ကို သမီးဖြစ်သူနဲ့ တိမ်းရှောင်လာခဲ့တာပါ။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အလွတ်သတင်းထောက် အောင်ကြီးနံမည်နဲ့ နယ်စပ်က
သတင်းဓါတ်ပုံများ ရိုက်ကူးပြီး ပြည်တွင်းသတင်း ဂျာနယ်တွေကို ပို့နေသူ တဦး
ဖြစ်ကြောင်း မိသားစုကပြောပါတယ်။ သတင်းသမားတွေကို အကာအကွယ်ပေး
နေတဲ့ ကော်မတီဖြစ်တဲ့ CPJ ကတော့ အောက်တိုဘာလ ၂၂ရက်နေ့ နေစွဲနဲ့
ကိုအောင်ကျော်နိုင် ခေါ် ကိုပါကြီးကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ မြန်မာ အစိုးရကို တောင်းဆို
အလွတ်သတင်းထောက် ကိုပါကြီးကို ဖမ်းဆီးတာက စက်တင်ဘာလထဲမှာ။ ကိုပါကြီး ပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုပြီး သတင်းစထွက်လာတာတွေ၊ ဇနီးဖြစ်သူ မသန္တာကနေ ရဲစခန်းမှာ လူပျောက်တိုင်ချက်ဖွင့်တာတွေ၊ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်တာက အောက်တိုဘာလလယ်နောက်ပိုင်းနဲ့(၂၁) ရက်နေ့ ကြမှ။ ဒါတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာပြီးမှ ကမန်းကတန်း ချက်ချင်း မနေ့ က အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ ကမှ သတင်းထွက်လာတာက စစ်တပ်က ထိမ်းသိမ်းထားစဉ်မှာ အပေါ့သွားရန် အကြောင်းပြချက်နဲ့ကင်းစောင့်စစ်သားထံကနေ သေနတ်လုယူ ထွက်ပြေးရန် ကြိုးပမ်းတဲ့အတွက် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရတာကြောင့် သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့အသေဖမ်းဆီးရမိတယ်ဆိုပြီး သတင်းထွက်လာတယ်။
ပထမဦးဆုံး လှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ (၄) နာရီမှာ ရန်ကုန်မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ မှာ ကိုပါကြီး ကိစ္စအတွက် အားလုံးကို ရင်တွင်းက ဆန္ဒတွေဖော်ထုတ်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မ အာဃာတ ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ စနစ်ဆိုးအောက်က စစ်အာဏာရှင် စစ်ဘီလူးတွေကို ကျွန်မ ရဲ့ရှိလောက်တဲ့ စွမ်းအားအကုန်နဲ့ ရင်ဆိုင်မယ်။ ကျွန်မ တို့သားအမိလို နောက်လူတွေမခံစားရအောင် သွေးဆာနေသူတွေကြောင့် ကျွန်မ လို တိုင်းရင်းသူ မြန်မာနိုင်ငံသူအားလုံး မုဆိုးမ မဖြစ်အောင် ကျွန်မ ကို အမှန်တရားအတွက် ကူညီပေးကြပါ။
ဘယ်သူကမှ ပျက်အောင် မပြင်ပါဘူးတဲ့ ဦးလှဆွေကတောင်ြေ...
သေဆုံးသွားသော ကိုပါကြီးအတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်ခန်းမ...